Humour – စာမကျြနှာ7– Healthy Life Journal
သူပြောတော့လည်း လွယ်လွယ်လေး . . .
အရက်ဆိုင်တွင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သောက်ရင်း၊ စားရင် စကား ပြောနေကြသည်။ ” ငါ ညညဆို ခုတင်အောက်မှာ လူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ ထင်နေပြီး ခဏခဏ ငုံကြည့်မိနေတာနဲ့ ကောင်းကောင်းကို အိပ်မပျော်ပါဘူးကွာ . . စိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တော့ ဒီကြောက်စိတ်တွေပျောက်ဖို့ဆိုရင် တစ်ပတ်ကို...
လာနေကျ လူနာ . . .
မေ့ပျောက်ချင်တဲ့ မှတ်ဥာဏ်တွေကို အိပ်မွေ့ချပြီး ချက်ချင်းမေ့သွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးဆရာကြီးဆီကို အမျိုးသားတစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပုံစံနဲ့ ရောက်လာပါတယ်။ ” ကျွန်တော့ကို ကူညီပါ ဆရာကြီးရယ် . . . ကျွန်တော် ၁၅ နှစ်လုံးလုံး ကျွန်တော့မိန်းမအပေါ် သစ္စာစောင့်ထိန်းခဲ့ပေမယ့် တစ်နေ့က...
ဆေးခန်းပြပြီး ပြန်လာတဲ့ယောက်ျားက အိမ်ရောက်တဲ့အခါ မိန်းမဖြစ်သူကို ပြောပြတယ်။ ” ဆရာဝန်က မှာလိုက်တယ် .. စိတ်ဖိစီးမှုလုံးဝပျောက်သွားဖို့ အလုပ်တွေ ခဏနားထားပြီး ဘုရားဖူးတွေလည်းထွက်ပါ.. ကမ်း ခြေမှာလည်း တစ်ပတ်လောက်သွားနားပါ.. နိုင်ငံခြားခရီးတွေပါ ထွက်လိုက်ပါလို့ ပြောလိုက်တယ်.. ကိုယ်တို့ ဘယ်ကို အရင်သွားရင်...
“ ဆရာ. . ကျွန်တော့်မိန်းမ အသံဝင်သွားတာ . . အခုဆိုရင် အသံ လုံးဝမထွက်တော့ဘူး . . ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်” “ လွယ်ပါတယ်ဗျ . . ခင် ဗျားညနေ ရုံးဆင်းရင် အိမ်ကို တန်းမပြန်ဘဲ...
လင်မယားနှစ်ယောက် သွားဆေးခန်းသို့ရောက်လာကြပါတယ်။ အမျိုးသားဖြစ်သူက ဆရာဝန်ကို ပြောတယ်။ “သွားတစ်ချောင်းက လှုပ်နေပြီး နာလည်းနာနေလို့ မြန်မြန်နုတ်ပေးပါ ဆရာရယ်။ ကျွန်တော်အခု အရမ်းအလျင်လိုနေလို့ ထုံဆေးတွေ ပေးမနေပါနဲ့တော့. . ဒီတိုင်းသာ မြန်မြန်ဆွဲနုတ်ပေးပါတော့ . . ဆရာ” “ခင်ဗျားကတော်တော်သတ္တိကောင်းတာပဲ.. ကဲ....
အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ လျှောက်သွားပြီး ညဉ့်နက်မှ ပြန်လာတဲ့ ယောက်ျားကို မိန်းမက ဆူပူနေသည်။ “ ဆရာဝန်က ရှင့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုလျော့အောင် တစ်ပတ်ကို တစ်ရက် အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ထွက်လည်ပါလို့ ပြောလို့ ခွင့်ပြုထားတာ၊ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ပတ်လုံးလုံး နေ့တိုင်းအပြင် သွားနေတာလဲ ပြောပါ...
အားပေးလိုက်ပုံက . . .
မိန်းမဖြစ်သူသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်မှန်ထဲကြည့်ပြီး ယောက်ျားဖြစ်သူကို ပြောသည်။ ” ကျွန်မအသားလည်း မည်းလာတယ်.. ၀လည်း ၀လာတယ်.. ရုပ်လည်း ကျလာပြီး ကြည့်ရဆိုးလာလို့ စိတ်ဓာတ်တောင်ကျလာပြီ. . . ရှင် . .ကျွန်မ အားတက်အောင် ကောင်းကွက်လေး ဘာလေးရှာပြီး အား...
အဖြေက ရှင်းပါတယ် . . .
အရေပြားအထူးကုဆရာကြီးထံသို့ ကလေးမလေးတစ်ယောက် ၀က်ခြံတွေ အရမ်းထွက်နေတဲ့အတွက် လာရောက်ပြသလေသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက ကြည့်ရှုပြီးနောက် – “ဘာမှ စိတ်မညစ်နေနဲ့တော့ သမီးရေ. . . ဆရာရဲ့ အမြင်အရတော့ သမီး နောက်ထပ်ဝက်ခြံထပ် မထွက်နိုင်တော့ဘူး . . . အခု...
ဘယ်သူ အရင်ဖြတ်နိုင်မယ် . . .
“ ကို . . . အရက်ဆိုတာ အလွန်အကျွံသောက်ရင် အသည်းကိုထိခိုက်တယ်. . . ကို့ကိုကျန်းမာသက်ရှည်စေချင်လို့ ဘယ်နေ့အရက်ဖြတ်မလဲဟင်” “ ခင် တညင်းသီးမစားတော့တဲ့နေ့ပေါ့ကွယ်” “ ဟင် ဘာဆိုင်လို့လဲ” “ တညင်းသီးကလည်း များများစားရင် ကျောက်ကပ်ထိခိုက်တယ်တဲ့…...
ဆရာဝန်နှစ်ယောက် ဒေါက်တာရမ်းကုဘေးတွင် စကားပြောနေကြသည်။ “ ကျွန်တော် ကုပေးနေတဲ့ ၆ လပဲခံတော့မယ့် လူနာက ၁ နှစ်တောင် နေသွားနိုင်တယ်ဗျ” ” ၀မ်းသာစရာပဲ . . ကျွန်တော်လူနာလည်း ၄ လလောက်ပဲရှင်နိုင်မယ့် အခြေအနေကို ၂ နှစ်...